नेपालमा सर्पदंश : बर्सेनि ४० हजार प्रभावित, कतिको जान्छ ज्यान? – Health Post Nepal
नेपालमा सर्पदंश : बर्सेनि ४० हजार प्रभावित, कतिको जान्छ ज्यान?
२०७८ फागुन ३ गते ९:३५
काठमाडौं – सर्पदंश सुरु हुने मौसम नजिकिँदै गर्दा यसको अवस्था तथा रोकथाम सम्बन्धी भइरहेका अनुसन्धानहरूको फेरि चर्चा सुरु भएको छ।
नेपालमा सर्पदंशले प्रभावित जनसंख्या तथा यसबाट हुने मृत्युवरणको अवस्था विकराल छ। हरेक वर्ष हजारौं मानिस तथा घरपालुवा जनावर यसको शिकार हुने गरेका छन्।
प्राप्त तथ्यांक अनुसार नेपालमा बर्सेनि ४० हजार मानिसमा सर्पदंश हुने गरेको छ। जसमा करिब ३ हजार व्यक्तिले यसै कारण ज्यान गमाउनु परेको छ। नेपालमा यसबाट ज्यान गुमाउनुका मुख्य कारण दुईवटा छन्: एउटा–उपचार पाउन ढिलो भएर र दोस्रो–उपचारकै अभावमा।
सर्पदंशको यो भयाभय स्थितिको रोकथाम र यसबाट हुने मृत्युवरणलाई कम गर्न सकिने बताउँछन् प्राध्यापक डा. सञ्जीव कुमार शर्मा।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा मेडिसिन विभागमा प्राध्यापक डा. शर्माले सर्पदंशको रोकथाम र यसबाट हुने मृत्युवरणलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर अनुसन्धान गरिरहेका छन्।
उनीले गरेको सर्पदंशसम्बन्धी अनुसन्धानको सिलसिलामा विश्वमै एउटा नयाँ पाटो, अर्थात मानिससँगै खासै वास्ता नगरिएको जनावरमा हुने सर्पदंशको अवस्थाका बारेमा समेत अध्ययनले समेतेको डा. शर्मा बताउँछन्।
विश्वमै चासोका साथ हेरिएको यो अध्ययन आजकै दिन अर्थात फेब्रुअरी १५ मा जेनेभा र बेलायतबाट एकै साथ पत्रकार सम्मेलनमार्फत विमोचन गरिँदैछ।
नेपालमा यससम्बन्धी ठोस तथ्यांक नभएकोले स्वीस नेसनल साइन्स फाउन्डेसनकाे संयोजनमा जेनेभा विश्वविद्यालय र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानको सहकार्यमा संसारका धेरै राष्ट्रबाट चिकित्सकहरूको टोली मिलेर २०१८ बाट विस्तृत अध्ययन सुरु गरिएको थियो। यो टीममा प्रमुख अनुसन्धानकर्तामध्ये नेपालबाट डा. शर्मा छनोटमा परेका थिए।
उक्त अध्ययनले सर्पदंशका कारण मानिसहरूका साथसाथै घरपालुवा जनावरमा पारेको प्रभावसमेतलाई औँल्याएको छ। मानव र जनावरलाई सर्पदंशबाट असर पर्ने कुरालाई समष्टिगत रूपमा समेटिएको या अध्ययनलाई ‘वान हेल्थ डिजाइन’ भित्र समेटिएको छ।
यो अध्ययनलाई नेपालमा मात्रै नभएर संसारकै पहिलो अध्ययन मानिएको अध्ययन टोलीको दाबी छ।
नेपालका सातै प्रदेशको तराई क्षेत्रमा रहेका झन्झै २५० गाउँपालिका, १३ हजार परिवार र ६३ हजारभन्दा बढी मानिसलाई समेटिएको यो अध्ययन घर–घरमै गएर ल्याइएको तथ्यांक भएको डा. शर्माले बताए।
अध्ययनका अनुसार पुरुषको तुलनामा सर्पदंशका कारण मृत्यु हुनेमा दुई तिहाइभन्दा बढी महिला हरेका छन्। त्यसैगरी सर्पदंशका कारण ज्यान गुमाउनेमध्ये सबैभन्दा बढी ४६ प्रतिशत ५ देखि १४ वर्षका बालबालिका रहेको अध्ययनले देखाएको छ।
सर्पदंशले मानिसको मृत्युका साथै उसको स्वास्थ्यमा पार्ने असर, आयस्रोतमा पर्ने भारसँगै घरपालुवा जनावरलाई टोक्दा परेको आर्थिक एवम् सामाजिक असरलाई समेत यो अध्ययनले कलाएको छ।
अध्ययनका अनुसार नेपालको तराई–मधेस क्षेत्रमा वार्षिक करिब ३८ हजार घरपालुवा जनावर सर्पदंशको सिकार भइरहेका छन्। यी जनावरमध्ये सबैभन्दा बढी ३३ हजार कुखुरा, ४हजार गाई तथा भैंसी र २ हजार बाख्रा बरहेको अध्ययनले देखाएको छ। यसरी सर्पदंशमा परेका गाई, भैसीमध्ये ७८ प्रतिशत र कुखुराको शतप्रतिशत मृत्यु हुने गरेको छ।
झण्डै ३० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस सर्पदंशपछि उपचार नै नपाउने र जसोतसो उपचार केन्द्रसम्म पुगेका बिरामीमध्ये ५० प्रतिशतले खोप नपाउने समस्या रहेको अध्ययनले औल्याएको छ।
तराई–मधेसमा बसोबार गर्ने मानिसको प्रमुख आयश्रोत खेती किसानी हो। यसमा पनि घरपालुवा जनावर आयश्रोतको मुख्य श्रोत हो। यसले पनि यो क्षेत्रमा मानिसका साथै घरपालुवा सर्पदंशको बढी जोखिममा छन्। सर्पदंशबाट एकातिर मानिस र जनावरको सही समयमा उपयुक्त उपचार नपाउँदा र्मत्यु हुने गरेको छ भने यसबाट किसानले आर्थिक–सामाजिक क्षति ब्यहोर्नु गरेको छ।
‘दी ल्यान्सेट ग्लोबल हेल्थ’ नामक अन्तर्वार्ता आधारित कार्यक्रममा आमन्त्रित डा शर्माले सर्पदंशबाट हुने विभिन्न असर र यसदाई कम गर्न आवश्यक उपयुक्त रोकथामका विधिबारे बताएका छन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको मार्गचित्रलाई ध्यानमा राखेर स्थानीय तहदेखि प्रभावकारी कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्ने र उपचार केन्द्रसम्म पुग्न सहज वातावरण बनाउन सकेको अवस्थामा बिरामीको ज्यान जोगाउन सकिने उनको तर्क छ। साथै उपचार केन्द्रसम्म पुगेका बिरामीलाई उपयुक्त उपचारलगायतका विषयमा अध्ययनले विस्तृतमा समेतको डा. शर्माले बताए।